Uhuru Kenyatta oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha Soomaaliya u fadhin doona Kenya - Halbeeg News
Uhuru Kenyatta oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha Soomaaliya u fadhin doona Kenya
NAIROBI(HALBEEG)- Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta magaalada Nairobi warqadaha aqoonsiga danjirenimo uga guddoomay safiirka Soomaaliya u fadhin doona Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
Safiirka Soomaaliya u joogi doona dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ka mid ahaa illaa 17 Safiir oo maanta waraaqahooda aqoonsiga uu qasriga madaxtooyada Nairobi kaga guddoomay madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa dhawaan loo magaacabay danjiraha Soomaaliya ee dalka kenya isagoo horey u ahaa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo ee dhanka siyaasadda.
Danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhin doona dalka Kenya ayaa horey u soo noqday guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho.
Ambasador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ka mid ahaa musharixiintii la tartamaya madaxweynaha Soomaaliya doorashadii dhacday 8 feberayo.
Xiriirka diblumaasiyeed iyo midka ganacsi ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa kordhay tan iyo markii dib loo furay safaaradda Kenya ee Muqdisho bishii Luuliyo sanadki 2015-kii.
Marka laga soo tago xiriirka Ganacsi iyo midka diblumaasiyeed ee ka dhexeeya labad dowladood waxa ay ka wada shaqeeyaan arrimaha si loola dagaalamo ururka Al-Shabaab. Ciidamada dalka Kenya ayaa qeyb ka noqday ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM bishii Oktooobar sanadkii 2015-kii.
Aqalka sare oo meel mariyay xeerka dhismaha guddiga la dagaallanka musuqa
Shirkadda Kenyan Airways oo dib u dhigtay duulimaadyadii ay ka bilaabi laheyd Muqdisho